Brand Nhau - Shanghai Yangli Furniture Nyaya Co, Ltd.
Iyo imwe mhando yekambani yeYangLi, tarisa pazvibato zvemakabati ekicheni, makabati ekugezera, midziyo yemumba. "Geriss" ndeyeyekupedzisira-yakavanzika yakavharika slide, simbi bhokisi sisitimu, yeEuropean classical handles uye ezvazvino mabato ayo anofarira mukurumbira wepamusoro pakati pemidziyo vatengi.
Kwakatangira zvisikwa zveGeriss brand: "G" inomiririra locomotive, yakatungamira YangLi kune nyika, "R" inomiririra Yang Liren, Yang Li vanhu vanoomerera ku "yakanaka nerunyararo, Li Bo uye pamusoro pe" bhizinesi uzivi, kutsigira rugare, kuenzana muhupenyu, kuzvivimba, kuzvivimba, kuzvisimbisa pamwe nemweya wehunyanzvi, kugadzira mhando yepamusoro yevatengi, kunakidzwa nerukudzo rukuru mumakabati eAmerica, indasitiri yemiti yakasimba.
Yanlgi's damping slide, damping hinge, uye ovhite accessories zvakadhindwa ne logo Iyo "Y" iri muYANGLI iri panzvimbo yenjiva yerunyararo, zvinoreva kuti Yangli Kambani inoshambadza munhu wekuenzana, bhizinesi rerunyararo, anoteerera mutemo uye fungidziro yechibvumirano. Unogona kusununguka kubhururuka. Iyo YANGLI brand yakavambwa makore anoda kusvika makumi maviri, iine mhando yepamusoro, mutengo unonzwisisika, unakidzwa nerukudzo rwepamusoro muEuropean neAmerican fenicha indasitiri.
Yechitatu brand yeYangli kambani, tarisa pane simbi dhirowa system, yakavanzwa masiraidhi, bhora rinotakura masiraidhi, hinji etc.HIFEEL ipfupi kune "HIGH QUALITY FEEL". Zvinoreva kuti isu tiri kuyedza kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvevatengi vedu.